နေ့ဘက်စာလုပ်တာနဲ့ညဘက်စာလုပ်တာ ဘယ်ချိန်ပိုကောင်းတယ်ထင်လဲ | Edge.com.mm : Best Education Guide in Myanmar
ကြောငျးသားတိုငျး (မိဘတှအေပါအဝငျ) တခါတလကေရြငျ အိမျစာပဲဖွဈဖွဈ စာမေးပှဲအတှကျပဲဖွဈဖွဈ စာကို ကကြနြနထိုငျလုပျဖွဈဖို့ အတျောကို ခကျခဲတယျဆိုတာ သိကွပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ စနတေနင်ျဂနှပေိတျရကျတှေ ရောကျလာပွီဆိုရငျ ပိုဆိုးပါတယျ၊ ပိတျရကျက ဘယျလိုကုနျသှားမှနျးမသိလိုကျတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။
တနင်ျဂနှနေညေ့ရောကျနပွေီ ပွီးရမယျ့စာတှကေ မပွီးသေးဘူးဆိုတာမြိုးက ကြောငျးသားတျောတျောမြားမြား ကွုံဖူးကွပါတယျ။
ကိုယျ့အခြိနျဇယားအတိုငျး စာလုပျတာတှကေ ကြောငျးစာတှအေခြိနျမှနျ ပွီးစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီအခြိနျဇယားရေးဆှဲတဲ့အခါမှာတော့ မိဘတှတေျောတျောမြားမြားက “ဘယျအခြိနျက ငါ့ကလေးအတှကျ စာလုပျဖို့အကောငျးဆုံးအခြိနျလဲ” ဆိုပွီးတှေးမိကွမယျထငျပါတယျ။ တခြို့မိဘတှကေတြော့လညျး မနကျပိုငျး စောစောထကကျြတာ ပိုကောငျးတယျလို့ ယူဆကွပါတယျ။
တဈနတေ့ာ၏ အခြိနျမြားက ကြောငျးသားမြား၏ ဦးနှောကျအပျေါသကျရောကျပုံ
ကြောငျးသားတှရေဲ့ ဦးနှောကျက တညတာလုံးပွညျ့ပွညျ့၀၀အိပျထားပွီး အာဟာရမြှတတဲ့နံနကျစာစားပွီးခြိနျ မနကျပိုငျးမှာ အထကျမွကျဆုံး ဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီအခြိနျက ဖတျစာအုပျလေးဖှငျ့ပွီး ကိုယျမကကျြရသေးတဲ့ စာအသဈတှေ ဒါမှမဟုတျ အရငျနကေ့ ကကျြထားပွီးသားစာတှကေို ပွနျနှေးဖို့ကောငျးတဲ့အခြိနျပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဦးနှောကျက ပုံမှနျထကျပိုပွီး နိုးနိုးကွားကွားရှိနတေဲ့အတှကျ ကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ နာမညျ၊ နရော၊ ခုနှဈနဲ့ အခကျြအလကျတှလေို အသေးစိတျမှတျမိရမယျ့အရာတှကေို ပွနျသတိရစနေိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။
နလေ့ညျဘကျမှာကတြော့ သူတို့ရဲ့ဦးနှောကျက သူတို့သိထားပွီးသားဖွဈပမေယျ့ သိပျမရသေးတဲ့စာတှေ အကွာကွီးပဈထားမိပွီး အသဈလိုဖွဈနတေဲ့စာတှကေို ပွနျလုပျဖို့အတှကျ ကောငျးပါတယျ။ ဒီအခြိနျတှမှောဆိုရငျ ကြောငျးသားတှကေ သူတို့သငျထားပွီးသားစာတှရေဲ့ အဓိပ်ပာယျကို ပိုနားလညျပွီး သခြောမှတျမိသှားတတျကွတယျ။
တဈနတေ့ာရဲ့ ဘယျအခြိနျက စာလုပျဖို့ အကောငျးဆုံးလဲ?
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ စာလုပျတဲ့အခြိနျတှေ မတူညီကွပါဘူး။
ကြှနျတျောတို့ တဈယောကျခငျြးစီရဲ့ တဈနတေ့ာမှာ စှမျးအငျအပွညျ့ဝဆုံးအခြိနျဆိုတာရှိပွီး အဲ့ဒီအခြိနျက Productive အဖွဈဆုံးအခြိနျပဲ ဖွဈပါတယျ။ တခြို့လူတှကေတြော့ အားအငျတှအေမြားကွီးနဲ့ နိုးထလာတတျတဲ့ Morning People တှပေဲ ဖွဈကွပါတယျ။
တခြို့ကတြော့လညျး မနကျပိုငျးဆို နုနျးခြိသလို အားမရှိသလို အိပျငိုကျသလိုနဲ့ ညနပေိုငျးတှရေောကျမှပဲ ပိုပွီးလနျးဆနျးလာတတျတဲ့ Night Owls တှေ ဖွဈကွပါတယျ။
ကြောငျးသားတဈယောကျခငျြးစီမှာ သူတို့ကိုယျပိုငျ စာကကျြတဲ့စတိုငျလျတှေ ရှိကွသလိုပဲ မတူညီတဲ့ ကြောငျးသားတှကေ တဈနတေ့ာရဲ့ မတူညီတဲ့အခြိနျမှာ ပုံမှနျထကျပိုပွီး စာလုပျနိုငျကွပါတယျ။
တခြို့ကြောငျးသားတှအေတှကျ မနကျပိုငျးအခြိနျတှမှော ကြောငျးစာထဲ အာရုံစူးစိုကျရတာ ပိုလှယျကူသလို တခြို့ကပြွနျတော့ ညဘကျမှာ စာလုပျရတာ သူတို့အတှကျ ပိုကောငျးတာကို တှရေ့ပါတယျ။
မနကျပိုငျးမှာ အားအငျပိုရှိတဲ့ကြောငျးသားတှကေ သူတို့ရဲ့ဦးနှောကျ မနကျပိုငျးမှာပိုအာရုံစူးစိုကျနိုငျလို့ မနကျပိုငျးမှာပဲ စာလုပျဖို့အသငျ့တျောဆုံး ဖွဈပါတယျ။ သူတို့တှကေ တညတာလုံး ကောငျးကောငျးမှနျမှနျအိပျထားတဲ့အတှကျ သူတို့ရဲ့စိတျတှကေို လနျးဆနျးတကျကွှနစေပေါတယျ။
ဒီစှမျးအငျတှကေ သူတို့ကကျြမှတျနတောတှထေဲကို အာရုံစူးစိုကျဖို့ ပိုမိုလှယျကူစပွေီး မှတျသားစရာတှကေိုလညျး ပိုမိုထိရောကျစှာ မှတျယူနိုငျစှမျးရှိစပေါတယျ။
• ဦးနှောကျက ကောငျးမှနျစှာ အိပျစကျထားခွငျးကွောငျ့ လနျးဆနျးနပွေီး မှတျသားစရာမြားကို ပိုမိုမှတျယူနိုငျခွငျး
• သဘာဝအလငျးရောငျက မကျြလုံးအတှကျကောငျးပွီး သငျ့ကို နိုးနိုးကွားကွား ရှိစခွေငျး
• ပုံမှနျအိပျခြိနျကို အနှောငျ့အယှကျမဖွဈခွငျး
• အတနျးဖျောသူငယျခငျြးတှနေဲ့ စာကကျြဝိုငျး (စာတူတူစုကကျြခွငျး) လုပျဖို့ ပိုမိုလှယျကူခွငျး
တဈနတေ့ာရဲ့နှောငျးပိုငျးအခြိနျတှမှော ပိုပွီးအားအငျရှိတဲ့ ကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ ညနေ ဒါမှမဟုတျ ညဘကျတှမှော စာလုပျတာက ပိုထိရောကျမှုရှိစပေါတယျ။ အနှောငျ့အယှကျနညျးပါးပွီး တိတျဆိတျငွိမျးခမျြးနတေဲ့အတှကျ ညဘကျမှာစာလုပျခွငျးက ကြောငျးသားတဈယောကျရဲ့ စိတျပါဝငျစားမှုနဲ့ အာရုံစူးစိုကျနိုငျမှုအားကို တိုးတကျလာစပေါတယျ။
သငျ့ကြောငျးသားက ညနေ ဒါမှမဟုတျ ညဘကျစာလုပျသူဆိုရငျတော့ သူ့အနနေဲ့ တဈညတဈည လုံလုံလောကျလောကျ အိပျရဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ကလေးတှကေ တဈညကို ပြှမျးမြှ ၈-၉ နာရီလောကျ အိပျဖို့လိုအပျပါတယျ။
တကယျလို့ အိမျစာ ဒါမှမဟုတျ စာလုပျခြိနျက အိပျခြိနျကို နောကျကစြတေယျတယျဆိုရငျ နညျးနညျးစောစောလေး ပုံမှနျအိပျရာဝငျတတျတဲ့အကငျြ့ရှိလာအောငျ လုပျပေးတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
ညနေ/ညဘကျ စာလုပျခွငျး၏ အကြိုးကြေးဇူးမြား
• တိတျဆိတျငွိမျးခမျြးမှု ပိုမိုရရှိခွငျး
• အနှောငျ့အယှကျ ပိုမိုနညျးပါးခွငျး
• တီထှငျကွံဆခွငျး (Creative thinking) အတှကျ ပိုမိုကွညျလငျသော စိတျရှိခွငျး
• စာလုပျပွီးအိပျစကျခွငျးအားဖွငျ့ ကကျြမှတျထားသောစာမြားကို တဈစုတဈစညျးတညျးဖွဈစပွေီး ပွနျလညျမှတျမိနိုငျစှမျး မွငျ့တကျလာခွငျး
သငျ့ကလေးအတှကျ စာလုပျဖို့အကောငျးဆုံးအခြိနျကို သိအောငျလုပျပါ။
သငျသတိတခကျြပွုရမှာက သငျ့ကလေးအနနေဲ့ တဈနတေ့ာရဲ့ ဘယျအခြိနျတှမှော စာလုပျဖို့သတျမှတျထားသလဲဆိုတာ အပါအဝငျ သူ့ကိုယျပိုငျ စာလုပျတဲ့နညျးလမျးပေါငျးစုံကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
သူ့အတှကျ ဘယျအခြိနျက အကောငျးဆုံးလဲဆိုတာ သငျသိတာနဲ့ သငျ့ကလေး အရငျကထကျပိုပွီး စာတှကေို ထိထိရောကျရောကျ စလုပျနိုငျလာပါလိမျ့မယျ။
မိမိတို့ တကျရောကျလိုသညျ့ သငျတနျးကြောငျးမြားနှငျ့ ပုဂ်ဂလိကကြောငျးမြားကို ရှာဖှလေိုပါက ဒီ Link မှာရှာဖှနေိုငျပါသညျ။
ပညာရေးလမျးညှနျ website တှငျ ပါဝငျသော သငျတနျးမြား၊ ကြောငျးမြား၊ Scholarship၊ Knowledge မြားနှငျ့ ပတျသကျသော အခကျြအလကျမြားကို ဝငျရောကျရှာဖှေ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
ကျောင်းသားတိုင်း (မိဘတွေအပါအ၀င်) တခါတလေကျရင် အိမ်စာပဲဖြစ်ဖြစ် စာမေးပွဲအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် စာကို ကျကျနနထိုင်လုပ်ဖြစ်ဖို့ အတော်ကို ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် စနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက်တွေ ရောက်လာပြီဆိုရင် ပိုဆိုးပါတယ်၊ ပိတ်ရက်က ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိလိုက်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ညရောက်နေပြီ ပြီးရမယ့်စာတွေက မပြီးသေးဘူးဆိုတာမျိုးက ကျောင်းသားတော်တော်များများ ကြုံဖူးကြပါတယ်။
ကိုယ့်အချိန်ဇယားအတိုင်း စာလုပ်တာတွေက ကျောင်းစာတွေအချိန်မှန် ပြီးစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်ဇယားရေးဆွဲတဲ့အခါမှာတော့ မိဘတွေတော်တော်များများက “ဘယ်အချိန်က ငါ့ကလေးအတွက် စာလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်လဲ” ဆိုပြီးတွေးမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ တချို့မိဘတွေကျတော့လည်း မနက်ပိုင်း စောစောထကျက်တာ ပိုကောင်းတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
တစ်နေ့တာ၏ အချိန်များက ကျောင်းသားများ၏ ဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်ပုံ
ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဦးနှောက်က တညတာလုံးပြည့်ပြည့်၀၀အိပ်ထားပြီး အာဟာရမျှတတဲ့နံနက်စာစားပြီးချိန် မနက်ပိုင်းမှာ အထက်မြက်ဆုံး ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအချိန်က ဖတ်စာအုပ်လေးဖွင့်ပြီး ကိုယ်မကျက်ရသေးတဲ့ စာအသစ်တွေ ဒါမှမဟုတ် အရင်နေ့က ကျက်ထားပြီးသားစာတွေကို ပြန်နွှေးဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်က ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး နိုးနိုးကြားကြားရှိနေတဲ့အတွက် ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ နာမည်၊ နေရာ၊ ခုနှစ်နဲ့ အချက်အလက်တွေလို အသေးစိတ်မှတ်မိရမယ့်အရာတွေကို ပြန်သတိရစေနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
နေ့လည်ဘက်မှာကျတော့ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်က သူတို့သိထားပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် သိပ်မရသေးတဲ့စာတွေ အကြာကြီးပစ်ထားမိပြီး အသစ်လိုဖြစ်နေတဲ့စာတွေကို ပြန်လုပ်ဖို့အတွက် ကောင်းပါတယ်။ ဒီအချိန်တွေမှာဆိုရင် ကျောင်းသားတွေက သူတို့သင်ထားပြီးသားစာတွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ပိုနားလည်ပြီး သေချာမှတ်မိသွားတတ်ကြတယ်။
တစ်နေ့တာရဲ့ ဘယ်အချိန်က စာလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးလဲ?
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စာလုပ်တဲ့အချိန်တွေ မတူညီကြပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ တစ်နေ့တာမှာ စွမ်းအင်အပြည့်ဝဆုံးအချိန်ဆိုတာရှိပြီး အဲ့ဒီအချိန်က Productive အဖြစ်ဆုံးအချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့လူတွေကျတော့ အားအင်တွေအများကြီးနဲ့ နိုးထလာတတ်တဲ့ Morning People တွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
တချို့ကျတော့လည်း မနက်ပိုင်းဆို နုန်းချိသလို အားမရှိသလို အိပ်ငိုက်သလိုနဲ့ ညနေပိုင်းတွေရောက်မှပဲ ပိုပြီးလန်းဆန်းလာတတ်တဲ့ Night Owls တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကျောင်းသားတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ သူတို့ကိုယ်ပိုင် စာကျက်တဲ့စတိုင်လ်တွေ ရှိကြသလိုပဲ မတူညီတဲ့ ကျောင်းသားတွေက တစ်နေ့တာရဲ့ မတူညီတဲ့အချိန်မှာ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး စာလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။
တချို့ကျောင်းသားတွေအတွက် မနက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာ ကျောင်းစာထဲ အာရုံစူးစိုက်ရတာ ပိုလွယ်ကူသလို တချို့ကျပြန်တော့ ညဘက်မှာ စာလုပ်ရတာ သူတို့အတွက် ပိုကောင်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မနက်ပိုင်းမှာ အားအင်ပိုရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေက သူတို့ရဲ့ဦးနှောက် မနက်ပိုင်းမှာပိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်လို့ မနက်ပိုင်းမှာပဲ စာလုပ်ဖို့အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေက တညတာလုံး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိပ်ထားတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့စိတ်တွေကို လန်းဆန်းတက်ကြွနေစေပါတယ်။
ဒီစွမ်းအင်တွေက သူတို့ကျက်မှတ်နေတာတွေထဲကို အာရုံစူးစိုက်ဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး မှတ်သားစရာတွေကိုလည်း ပိုမိုထိရောက်စွာ မှတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိစေပါတယ်။
• ဦးနှောက်က ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ထားခြင်းကြောင့် လန်းဆန်းနေပြီး မှတ်သားစရာများကို ပိုမိုမှတ်ယူနိုင်ခြင်း
• သဘာဝအလင်းရောင်က မျက်လုံးအတွက်ကောင်းပြီး သင့်ကို နိုးနိုးကြားကြား ရှိစေခြင်း
• ပုံမှန်အိပ်ချိန်ကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ခြင်း
• အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စာကျက်ဝိုင်း (စာတူတူစုကျက်ခြင်း) လုပ်ဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူခြင်း
တစ်နေ့တာရဲ့နှောင်းပိုင်းအချိန်တွေမှာ ပိုပြီးအားအင်ရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ညနေ ဒါမှမဟုတ် ညဘက်တွေမှာ စာလုပ်တာက ပိုထိရောက်မှုရှိစေပါတယ်။ အနှောင့်အယှက်နည်းပါးပြီး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့အတွက် ညဘက်မှာစာလုပ်ခြင်းက ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့ အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုအားကို တိုးတက်လာစေပါတယ်။
သင့်ကျောင်းသားက ညနေ ဒါမှမဟုတ် ညဘက်စာလုပ်သူဆိုရင်တော့ သူ့အနေနဲ့ တစ်ညတစ်ည လုံလုံလောက်လောက် အိပ်ရဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးတွေက တစ်ညကို ပျှမ်းမျှ ၈-၉ နာရီလောက် အိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အိမ်စာ ဒါမှမဟုတ် စာလုပ်ချိန်က အိပ်ချိန်ကို နောက်ကျစေတယ်တယ်ဆိုရင် နည်းနည်းစောစောလေး ပုံမှန်အိပ်ရာဝင်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိလာအောင် လုပ်ပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ညနေ/ညဘက် စာလုပ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
• တိတ်ဆိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု ပိုမိုရရှိခြင်း
• အနှောင့်အယှက် ပိုမိုနည်းပါးခြင်း
• တီထွင်ကြံဆခြင်း (Creative thinking) အတွက် ပိုမိုကြည်လင်သော စိတ်ရှိခြင်း
• စာလုပ်ပြီးအိပ်စက်ခြင်းအားဖြင့် ကျက်မှတ်ထားသောစာများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းဖြစ်စေပြီး ပြန်လည်မှတ်မိနိုင်စွမ်း မြင့်တက်လာခြင်း
သင့်ကလေးအတွက် စာလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကို သိအောင်လုပ်ပါ။
သင်သတိတချက်ပြုရမှာက သင့်ကလေးအနေနဲ့ တစ်နေ့တာရဲ့ ဘယ်အချိန်တွေမှာ စာလုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားသလဲဆိုတာ အပါအ၀င် သူ့ကိုယ်ပိုင် စာလုပ်တဲ့နည်းလမ်းပေါင်းစုံကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သူ့အတွက် ဘယ်အချိန်က အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ သင်သိတာနဲ့ သင့်ကလေး အရင်ကထက်ပိုပြီး စာတွေကို ထိထိရောက်ရောက် စလုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
Tips Read 2541 times